Fanadinana homem-bontsika mampiasa fitsipi-pitsaboana matematika
Ho an'ny mpampianatra Famaritana & Tests
Ataovy manao devoara matematika tena manan-danja ny fampiasana ny lahateny
18% -n'ny kilasy matematika ampiasain'ny devoaratra-ataovy izany!
Ny fanadihadiana momba ny asa an-teti-pianarana matematika any amin'ny efitrano fianarana ambaratonga faharoa nanomboka ny taona 2010 sy 2012 dia mampiseho fa eo anelanelan'ny 15% -20% amin'ny fotoam-pianarana isan'andro dia mandany ny famerenana ny devoara. Noho ny habetsahan'ny fotoana natokana ho an'ny famerenana any an-dakilasy, dia maro ireo manam-pahaizana momba ny fanabeazana no manohana ny fampiasana ny lahateny ao amin'ny efitrano fianarana matematika ho tetikady fampianarana izay afaka manome fahafahana ny mpianatra hianatra amin'ny devoara sy ny namany.
Ny Filankevi-pirenen'ny mpampianatra momba ny matematika (NCTM) dia mamaritra ny lahateny toy izao manaraka izao:
"Ny lahateny dia ny fifandraisana matematika izay mitranga ao an-dakilasy. Ny fandalinana mahomby dia mitranga rehefa mamolavola ny heviny ny mpianatra ary mandinika tsara ny fomba fijerin'ny namany ho fomba iray hanamboarana fahatakarana matematika."
Ao amin'ny lahatsoratra avy amin'ny Filankevi-Pirenena momba ny Matematika (NTCM) September 2015, mitondra ny lohateny hoe Ny fanaovana ny ankamaroan'ny asa an-trano dia ny mpanoratra Samuel Otten, Michelle Cirillo, ary Beth A. Herbel-Eisenmann dia milaza fa tokony " devoara ary mandroso mankany amin'ny rafitra iray izay mampiroborobo ny fitsipika mifehy ny matematika. "
Fikarohana momba ny lahatsoratry ny fanadihadiana momba ny devoaminay matematika
Ny fikarohana nataon'izy ireo dia mifantoka amin'ny fomba mampiavaka ny mpianatra hanao lahateny - ny fampiasana fiteny na fandikana hafa ary fomba fitenin'ny fifandraisana mba hampitana hevitra - amin'ny fandehanana devoara ao an-dakilasy.
Nanaiky izy ireo fa ny tena zava-dehibe amin'ny devoaran'ny tena dia ny "manome ny mpianatra tsirairay manana fahafahana hampivelatra fahaiza-manao sy hieritreritra hevitra matematika manan-danja." Ny fandaniana fotoana amin'ny kilasy handehanana entimody dia manome ny mpianatra ny "fahafahana hifanakalo hevitra amin'ireo hevitra ireo".
Ny fomba fikarohana nataon'izy ireo dia mifototra amin'ny fandalinan'izy ireo ny fanarahamason'ny fanabeazana an-tsarimihetsika 148. Ny fomba fiasa dia nampidirina:
Ny fandinihana ireo mpampianatra any am-pianarana manana fari-pahaizana isan-karazany (novokarina ho veterana) amin'ny traikefa an-dakilasy;
Fijerena kilasy faha-8 eo amin'ny sokajy eo amin'ny sokajy samihafa (tanàna, ambanivohitra, ary ambanivohitra);
Fahaizana manokana ny fotoana laniana amin'ny asa atao isan-karazany raha oharina amin'ny fotoana voatondro.
Ny fandinihan'izy ireo dia naneho fa ny fanaovana ny devoaran'ny hetsika dia tsy inona fa ny asa lehibe indrindra, mihoatra noho ny fampianarana manontolo, ny vondrona, ary ny asa fitoriana.
Ny fanadihadiana momba ny devise no manapaka ny efitrano fianarana matematika
Miaraka amin'ny devoara-manonona ny sokajy hafa amin'ny fampianarana matematika, ireo mpikaroka dia miady hevitra fa ny fotoana lanin'ny devoaran'ny devoara dia mety ho "fotoana lavorary indrindra, hampidirana fanomezana manokana sy mahery vaika amin'ny fahafahan'ny mpianatra mianatra" raha toa ka vita amin'ny fomba tanjona ny lahatenin'ny efitrano fianarana Ny tolo-kevitra?
"Ambonin'izany, manolotra tetikady izahay handehanana entimody izay ahafahan'ireo mpianatra mandray anjara amin'ny Fomba Matematika Common Core."
Raha nandinika ny karazana lahateny izay nitranga tao am-pianarana, dia nanapa-kevitra ireo mpikaroka fa misy "loha-hevitra tena goavana" roa :
Ny lamina voalohany dia ny fametrahana ny lahateny mikasika ny olan'ny tsirairay, ka raisina amin'ny fotoana iray.
Ny lamina faharoa dia ny firosoana amin'ny lahateny mba hifantohana amin'ny valinteny na fanazavana marina.
Ireto manaraka ireto dia misy antsipiriany momba ny tsirairay amin'ireo lamina roa ireo dia voarakitra ao amin'ny kilasin'ny horonan-tsarimihetsika momba ny horonan-tsary 148
Modely # 1: Miresaka momba an'i Vs. Miresaka amin'ny olan'ny tsirairay
Ny fikarohana dia mandrisika ny mpampianatra hiresaka momba ny olana ara-devolin'ny fikarakarana fifandraisana. GETTY Images
Ity lohahevitra momba ny lahateny ity dia fifanoheran-kevitra eo amin'ny resaka momba ny devoaratra, fa tsy mifanohitra amin'ny olana atrehin'ny devoara
Raha miresaka momba ny olana atrehin'ny devoara dia ny fifantohana dia ny mekanika amin'ny olana iray fa tsy ny hevitra matematika lehibe. Ny ohatra avy amin'ny fikarohana navoaka dia maneho fa ny lahateny dia mety voafetra amin'ny resaka miresaka momba ny devoara. Ohatra:
Mpampianatra: "Inona no fanontaniana nanananao olana?"
STUDENT (S) miantso hoe: "3", "6", "14" ...
Ny firesahana ireo olana dia mety midika fa voafetra ihany ny fifanakalozan-kevitry ny mpianatra mba hiantso ireo olan'ny famaritana ny zavatra nataon'ireo mpianatra tamin'ny olana manokana, iray isaky ny mandeha.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny karazana lahateny mifangaro amin'ny resaka olana dia mifantoka amin'ny hevitra matematika lehibe momba ny fifandraisana sy ny fahasamihafana eo amin'ny olana. Ny ohatra avy amin'ny fikarohana dia mampiseho ny fomba hanitarana ny lahateny rehefa mahafantatra ny tanjon'ny devoara ny devoara ny mpianatra ary nangataka mba hifanohitra ny olana. Ohatra:
Mpampianatra: " Jereo izay rehetra nataontsika tamin'ny olana teo aloha # 3, sy # 6. Manao fanazaran-tena _______, fa ny olana 14 dia mampivoatra anao bebe kokoa. Inona no ataonao 14?"
MPIANATRA: "Tsy mitovy ianareo satria manapa-kevitra ao an-tsainao hoe iza no hitovy amin'ny ______ satria efa manandrana manitsy zavatra iray ianao, fa tsy miezaka mamantatra izay mitovy aminy.
MPAMPIANATRA: "Ho hitanao ve fa sarotra kokoa ny fanontaniana # 14?"
Mpampianatra: "Fa maninona?"
Ireo karazana fifanakalozan-kevitr'ireo mpianatra ireo dia misy fepetra manokana momba ny fampiharana matematika izay voatanisa eto miaraka amin'ireo fanazavan'ireo mpianatra:
CCSS.MATH.PRACTICE.MP1 Manandrama olana ary miompana amin'ny famahana azy ireo. Fanazavana fanazavana ho an'ny mpianatra: Tsy manadino velively ny olana aho ary manao izay vitako aho mba hahazoana azy tsara
CCSS.MATH.PRACTICE.MP2 Antony mahagaga sy mandanjalanja. Fanazavana fanazavana ho an'ny mpianatra: Afaka mamaha olana aho amin'ny fomba maro
CCSS.MATH.PRACTICE.MP7 Mitady sy mampiasa rafitra. Fanazavana fanazavana ho an'ny mpianatra: Afaka mampiasa ny zavatra fantatro aho hamaha olana vaovao
Famaritana # 2: Miresaka momba ny valiny marina momba ny valiny
Ity laminan'ny lahateny ity dia fifanoherana eo amin'ny fifantohana amin'ny valim-bavaka sy fanazavana marina , mifanohitra amin'ny fahadisoan'ny mpianatra sy ny olana.
Amin'ny fifantohana amin'ny valiny sy ny fanazavana marina dia misy ny firosoana ho an'ny mpampianatra mba hamerina ireo hevitra sy fomba fanao tahaka izany nefa tsy mieritreritra fomba hafa. Ohatra:
Mpampianatra: "Miala tsiny ity valiny ity satria ... (manazava ny fomba hamahana ilay olana ny mpampianatra)"
Rehefa mifantoka amin'ny valiny marina sy fanazavana ny lohahevitra dia manandrana manampy mpianatra iray ny mpampianatra etsy ambony amin'ny famaliana izay mety ho antony nahatonga ilay fahadisoana. Ny mpianatra izay nanoratra ny valiny tsy mety dia mety tsy hanana fahafahana hanazava ny heviny. Mety tsy hisy fotoana ahafahan'ny mpianatra hafa manakiana hevitra hafa hanombantombanana na hanamarina ny fehin-keviny manokana. Ny mpampianatra dia afaka manome tetik'ady fanampiny amin'ny famahana ny vahaolana, saingy tsy nangataka ny hanao ny asa ireo mpianatra. Tsy misy tolona mahomby.
Ao amin'ny lahateny momba ny fahadisoana ataon'ny mpianatra sy ny fahasarotana , ny fifantohana dia ny amin'ny zavatra na ny fomba fihevitry ny mpianatra mba hamahana ny olana. Ohatra:
MPAMPIANATRA: "Ity valiny ity dia toa maneso ... Fa maninona? Inona no eritreretinao?
MPIANATRA: "Nieritreritra aho hoe _____."
Mpampianatra: "Eny, andao hiasa aoriana."
"Inona ireo vahaolana hafa azo atao?
"Misy fomba hafa ve?"
Amin'io endriky ny resadresaka momba ny fahadisoan'ny mpianatra sy ny fahasarotana io dia ny fampiasana ny fahadisoana no fomba iray entina hampianarana mpianatra bebe kokoa amin'ny fitaovana. Ny fampianarana ao am-pianarana dia azo ambara na ampitaina avy amin'ny mpampianatra na mpianatra mitovy taona.
Ny mpikaroka ao amin'ilay fanadihadiana dia nanamarika fa "amin'ny alalan'ny famantarana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fahadisoana miaraka amin'ny devoara dia afaka manampy ireo mpianatra hahita ny dingana sy ny lanjan'ny fikirizana amin'ny devoara."
Ankoatra ireo fenitra manokana mikasika ny fampiharana matematika ampiasaina amin'ny fifanakalozan-kevitra, ny fifanakalozan-kevitra momba ny fahadisoana sy ny fahasarotan'ny mpianatra dia voatanisa eto miaraka amin'ireo fanazavan'ireo mpianatra:
CCSS.MATH.PRACTICE.MP3 Mametraha hevitra azo tsapain-tanana sy manakiana ny fisainan'ny hafa.
Fanazavana fanazavana ho an'ny mpianatra: Azoko hazavaina amin'ny fomba fisainako ny momba ny matematika ary miresaka izany amin'ny hafa
CCSS.MATH.PRACTICE.MP6 Mandray fepetra. Fanazavana fanazavana ho an'ny mpianatra: Afaka miasa amim-pitandremana aho ary mijery ny asako.
Famaranana momba ny devoaran'ny devise tao amin'ny efitrano fianarana faharoa
Raha ny devoara dia tsy isalasalana fa ny fitazonana ao amin'ny efitrano fianarana matematika, ny karazana lahateny voalaza etsy ambony dia tokony hifantoka amin'ny fahazoana ny mpianatra mandray anjara amin'ny fitsipika momba ny matematika izay mahatonga azy ireo hikolokolo, handresy lahatra, hanorina hevitra, hitady rafitra, ary ho marim-pototra amin'ny valiny.
Na dia tsy ny adihevitra rehetra aza dia lava na manankarena, misy fahafahana bebe kokoa amin'ny fianarana rehefa mikasa ny hamporisika ny lahateny ny mpampianatra.
Ao amin'ny lahatsoratra navoakany, Mametraka ny ankamaroan'ny asa an-trano, ireo mpikaroka Samuel Otten, Michelle Cirillo, ary Beth A. Herbel-Eisenmann dia manantena ny hampianatra ny mpampianatra matematika ny fomba mety hampiasany ny fotoam-pahaizana momba ny devoara,
"Ny lamina hafa izay soso-kevitray dia manantitrantitra fa ny devoara-matematika-ary, ny matematika-dia tsy momba ny valiny marina, fa ny fisaintsainana, ny fifandraisana ary ny fahazoana hevitra goavana."
Famaranana fianarana nataon'i Samuel Otten, Michelle Cirillo, ary Beth A. Herbel-Eisenmann
Ny fandinihan'ny sekoly dia manome tombony ny fahalalàna
Inona ny sokajy ita?
Torolalana ho an'ny Programan'ny Kilonga an-taonan'ny IB
Fampianarana amin'ny fitsapana: Pros and Cons
Tabilao momba ny efitrano fianarana: Famerenana ny fotoana famaranana
40 "Miverina amin'ny loaky ny krismasy" fanoratana sora-baventy
'Harold sy ny Pencil Purple' lesona
Planeta Lesona Krismasy Acrostic
Fihetseham-panoavana andro mahafinaritra ho an'ny mpianatra fototra
Andraikitry ny Andro ho an'ny kilasy 1-3
Fihetseham-peon'ny Funny Broadway Audition ho an'ny vehivavy vavy ambony kokoa
Ny fototra iorenan'ny fahatsiarovan-tena
Ohatra tsara momba ny gaza: Fiatrehana ampahany
Architecture tany Tennessee, Torolalana ho an'ny mpandeha mahafinaritra
Top 10 Tea Craziest Party Quotes
¿Puud los extranjeros ingresar en las Fuerzas Armadas de EEUU?
Manadio ny sodinao
Kofehy mena sy bibikely
Ireo hetsika 10 manan-danja indrindra amin'ny tantaran'i Amerika Latina
Tsara indrindra ho an'ny tanora rehetra
Colonies Amerikana any Espaina sy ny System Encomienda
Mifidiana ny Tariny Deck
Fomba 7 hampandrosoana ny fahaizanao misaina
Tempolin'i Farao Hatshepsut ao Deir el-Bahri any Ejipta
'Ny Fanomezana ny Magy' Fanontaniana momba ny fandinihana sy ny fifanakalozan-kevitra
Ny tantaran'ny Constellations any an-danitra
Fampitandremana ny Donald Sterling-V. Stiviano Recording
Inona ny tantara ao ambadiky ny "tsy misy tanjona" any Brett Hull ao Buffalo?
Ahoana ny fomba hampianarana lesona fohifohy tsy hay hadinoina
Inona no niafara tamin'ny Lalàna momba ny Lalànan'i Obama
Ny rakitra ao amin'ny VB.NET
Mino ny Vavolombelon'i Jehovah
Inona no fampakarana?
Tantaran'ny Ice Capades